घोषणापत्र कि झूठको पुलिन्दा ? | EduKhabar
यी कुराहरु गर्न नदिने शत्रु को हो ? प्राथमिकतामा शिक्षा पर्ने तथा पार्ने हो भने यी कुराको उत्तर घोषणापत्रमा हुनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर के हो ? गुणस्तरको जिम्मेवार को हो, बाल विकास कस्को जिम्मामा हो । आधारभूत शिक्षा कस्को जिम्मामा हो । कस्को जिम्मामा माध्यमिक शिक्षा हो ? कस्को जिम्मामा उच्च शिक्षा हो ? यो कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्छ । लेखिनुपर्छ । चीनले भन्छ - बालविकास शिक्षा अभिभावकको जिम्मा हो । अमेरिका पनि त्यसै भन्छ । दुई भिन्न राजनीतिक परिपाटी । तर सोच एकै । नेपालका राजनीतिक दलहरु यसबारे चूप छन् । त्यही चुप्पी उनीहरुको घोषणापत्रमा आएको छ । आउँछ । आउने छ । बोली रुपान्तरणको । अभ्यास पुनरोत्पादन (reproduction) को ।
आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मा कस्को हो ? संविधानले भन्छ - यो काम स्थानीय सरकारको हो । कक्षा ८ सम्मको शिक्षा यसले ग्यारेण्टी गर्छ । गर्नुपर्छ । सबै दलका घोषणापत्रमा यो कुरा आउनुपर्छ । कसरी अनिवार्य गर्ने ? कसरी निशुल्क गर्ने ? निजी विद्यालयमा पढ्ने पढाउँनेसँग शुल्क लिने कि नलिने ? अर्थात् कर लिने कि ? रहरमा दान लिने कि ? सरकारले नै लगानी गर्ने कि ? गैरसरकारी तथा निजी विद्यालयको सहयोग लिने कि ? अथवा अन्य केही तरीका अपनाउने ? भारतको अनुभवले भन्छ - सरकारले लगानी गर्ने । नपुग रकम जनतासँग रहरमा दान माग्ने । निजीलाई सहयोग गर्न एडेड स्कूल बनाउने । रकम दिने । यता जाउ उता जाउ भन्ने । शुरुमा निजी लगानी माग्ने । एकाध वर्षमा सरकारको लगानी हुने । निजीको ब्यवस्थापन हुने । चीनको अनुभवमा मिनब्यान स्कूल चलाउने । उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निशुल्क शिक्षामा लगानी गर्न वाध्य गर्ने । मिनब्यान स्कूल त्यही कोटीका हुन् । एपार्टमेण्ट तथा फ्याक्ट्री स्कूल यही कोटीका हुन् । अमेरिका तथा यूरोपका स्कूल पूरै सरकारी लागतमा चल्छन् । चलाइन्छन् । हामी के भन्ने ? नियमित रुपमा स्कूल आउनेलाई कसरी आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ? स्कूल आउन नसक्नेलाई घरमा तथा नजीकको केन्द्रमा पढन पढाउन पाउने ब्यवस्था के हुने ? यो कुरा दलहरुको घोषणापत्रमा लेखिनु पर्छ ।
दलहरुले हिजो लेखेका घोषणापत्रहरुको विश्लेषणले भन्छ - ती झूठका पुलिन्दा हुन् । घोषणा गरिने । लागु गर्नु नपर्ने । जस्तो ठूला मानिएका दलहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्छाैं भनी लेखे । लगानी भने ११ प्रतिशत मात्रै गरे । कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिने भने । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित गर्छाैं भने । अहिले देशको औषतन शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३८ छ । दरबन्दी मिलान गर्छाैं भने हिमाली शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः५ भन्दा कम छ । शहरी भेगमा १ः१५ भन्दा कम छ । मधेशमा १ः ८०-८५ छ । गुणस्तर बढाउँछौं भने इआरओको प्रतिवेदन अनुसार दश बर्षमा गुणस्तर घट्दो क्रममा छ ।
निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गर्ने भने । तिनलाई सेवामुखी बनाउने भने । निजी तथा सरकारी विद्यालयबीच साझेदारीका उपायहरु लागुगर्ने भने । यी भनाइहरु कतै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अर्थात यी सूचकहरुको संकेत हो - दलका घोषणापत्रहरु झूठकै पुलिन्दा हुन । अपत्यारिला । आफनै दलले जितेका पालिकाका सूचकहरुले पनि खासै केही गरेको संकेत दिएन । यसको अर्थ हो - दलहरुले आआफना घोषणापत्रमा हिजोको बस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्छ । सोही समीक्षाको आधारमा यसो गर्छाैं भनी गर्न सकिने काम मात्रै लेख्नुपर्छ । तर कुनै पनि दलका घोषणापत्रले त्यसो गरेका छैनन् । यस अर्थमा घोषणापत्रहरु प्रतिवद्धता पत्र बनेनन् । बनाइएनन् ।
मेरो बुझाइ हो - दलहरुका घोषाणापत्रले शिक्षालाई मिसन बनाएनन् । मिसन बनाएको भए त्यसैमा सबै पालिकाहरु लाग्थे । पालिकाका आ-आफ्ना समस्याहरु थिए । उपलब्धीहरु थिए । समाधानका तरीकाहरु थिए । त्यसो हुँदा अर्काे सम्भावना पनि थियो - संविधानको प्रावधान र दलको चासो पालिकाहरुलाई दिने । पालिकाले नै आ-आफ्ना घोषणापत्र बनाउने ।
तेश्रो संभावना पनि थियो - गत निर्वाचनमा लेखिएका आआपना दलका घोषणापत्रहरु दिने । स्थानीय तहमा के थप्छौ थप भनी सल्लाह दिने ।
चौथो सम्भावना थियो - यो केन्द्रीय घोषणापत्र हो । यसलाई लागु नगर्ने तथा नसक्ने पालिकाको नेतृत्व दलको सदस्य बन्न नपाइने । यसरी चिन्तन गर्दा मैले ठम्याएँ कि दलहरुको सोच शिक्षा सुधार्ने देखिएन । बरु शिक्षा बिग्रिए शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई दलको झोला बोकाउन पाइन्छ भन्नेमा रमाएकै देखिन्छ । बहुदल जोगाउने नाममा । दलहरुलाई जिताउने शक्ति शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी नै हुन भन्ने स्वीकारमा । तिनलाई समालोचक बन्न दिएमा चुनाव जितिंदैन भन्ने बुझाइमा । कतै मेरो बुझाइलाई चुनौती गर्ने घोषणापत्र पो आउँछन् कि भन्ने पर्खाइमा छु ।
प्रकाशित मिति २०७९ वैैशाख १४ ,बुधबार